FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA :: Hamoaka ny vokatra feno vonjimaika rahampitso ny Ceni • AoRaha
FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA Hamoaka ny vokatra feno vonjimaika rahampitso ny Ceni
Raha tsy misy ny fiovana amin’ny ora farany, dia rahampitso alakamisy 27 desambra 2018 amin’ny efatra ora tolakandro no hamoahan’ny Vaomieram- pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) amin’ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana vonjimaika an’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa, nifanandrinan’ny kandidà laharana faha-13 Andry Rajoelina sy ny kandidà laharana faha-25 Ravalomanana Marc. Tsy hitsahatra amin’ny asany, fa hanohy ny fikirakirana ny voka-pifidianana 24 ora amin’ny 24 ora ireo mpiasan’ny Ceni. Niasa hatramin’ny andro nankalazana ny Krismasy izy ireo.
Tamin’ny alin’ny alatsinainy teo no tonga teny amin’ny foiben’ny Ceni Alarobia ireo taratasy mirakitra ny voka-pifidianana avy amin’ireo ivon-toerana fanangonana ny voka-pifidianana isaky ny distrika. Distrika telo sisa no nandrasan’ny Ceni, nanomboka ny alatsinainy maraina. “Manana telo andro izahay hampitahana an’ireo vokatra voaray, ka izay no antony hamoahana ny vokatra amin’io fe-potoana io”, hoy i Thierry Rakotonarivo, filoha lefitry ny Ceni, afak’omaly.
Raha ny voka-pifidianana vonjimaika navoakan’ny Ceni, omaly talata 25 desambra 2018, dia mitarika amin’ny taha 55,53 % ny kandidà Andry Rajoelina raha 44,47 % kosa ny an’i Marc Ravalomanana. Birao fandatsaham-bato miisa roanjato amin’ireo roa amby dimampolo sy valonjato sy efatra arivo sy roa alina manerana an’i Madagasikara sisa tsy feno amin’io taham-bato azon’ny roa tonta io.
Elanelam-bato dimy hetsyRaha izao voka-pifidianana vonjimaika efa ho feno navoakan’ny Ceni izao dia elanelam-bato manodidina ny dimy hetsy no manasaraka ny kandidà Andry Rajoelina sy i Marc Ravalomanana. Mahatratra 10 % eo ho eo io elanelana andresen-dRajoelina an-dRavalomanana io.
Araka ny voafaritra ao amin’ny lalàm-pifidianana dia 10 andro no fe-potoana nomena ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (HCC) mba hamoahana ny voka-pifidianana ofisialy, aorian’ ny famoahan’ny Ceni ny voka-pifidianana feno vonjimaika. Ao anatin’ izay fe-potoana izay no hitsaran’ny HCC an’ireo fitoriana samihafa voarainy manodidina an’ iny fifidianana filoham-pirenena iny.
Fara fahatarany izany dia tokony ho amin’ny 9 janoary 2019 ho avy izao no hivoahan’ny voka-pifidianana ofisialy etsy Ambohidahy. Ireo mpikambana eo anivon’ity andrim-panjakana ity no tompon’ny teny farany amin’ny mety hisian’ny fanovana an’izay voka-pifidianana vonjimaika havoakan’ny Ceni na tsia.